Indawo yokuhlala yaseSamoa #2, imiz nje emi-3 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yaseSamoa #2, imiz nje emi-3 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguVictor
Ibekwe kufutshane neSikhululo seenqwelomoya, indawo yegalufa, iivenkile ezinkulu, kunye neendawo zokutyela. Ukulala ukuya ku-1 ngokukhululeka, kunye nebhedi ephindwe kabini. Ipeyintwa ngokutsha; icocwe rhoqo.
Indlela entle yokufumana iAmerican Samoa, nazo zonke izinto zale mihla oya kuzifuna njenge-A/C, i-wifi, kunye newasher/isomisi esisebenza ngemali. Ihonjiswe ngengqokelela yobugcisa beSamoa kunye nemizobo.
Uvumelekile ukuba ufikelele kwifulethi lakho elizimeleyo kunye neendawo eziqhelekileyo, ezifana negumbi lokuhlamba impahla, indawo yepatio engaphandle, njl. Ukuze uhloniphe ezinye iindwendwe, siyakucela ukuba ungenzi ingxolo eninzi ngaphandle kwiindawo eziqhelekileyo emva kwe-9pm.
Indawo yethu ifumaneka ngokulula kwimizuzu nje ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, iivenkile ezinkulu, kunye neendawo zokutyela. Kwangaxeshanye, ikhutshelwe kude kwindlela enkulu, phantsi kwendlela yothuli yabucala.
Sihlala kufutshane kwaye siyafumaneka ukuba siyafuneka. Ngaphandle koko, sithanda ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo bazo.